Isku day Oxygen Font, nooca cusub ee KDE | Laga soo bilaabo Linux
Waqti ka hor sidaas baan kuu sheegay KDE sidoo kale yeelan doonaan font kuu gaar ah wac (sida waa macquul) ogsijiin, taas oo aan horeyba u tijaabin karno.
Akhriste iyada oo loo marayo faallooyin ayaa i dhaafay xidhiidhkan halkaas oo aan ka soo dejisan karno qoraalka si aan ugu tijaabino noocyo kala duwan. Waxaan kala soo bixi karnaa dhowr siyaabood iyada oo loo marayo terminaalka:
Isticmaalka Git leh HTTP:
Ama Hoos u dhigida tarball:
Mid kasta oo ka mid ah 3-da qaab, waxaan ku heli doonaa 3 fayl oo aan gudaha ku ridi karno / usr / share / noocyada o ~ / .futooyinka. Oo waa diyaar ..
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Muuqaal / Shakhsiyeyn » Isku day Oxygen Font, nooca cusub ee KDE
Ugu dambeyntii il asal ah oo loogu talagalay KDE, marwalba waa in lagu abuuraa ilo kale. By habka, qof ayaa mar horeba isku dayay iyaga, ma u muuqdaan kuwo wanaagsan oo leh antialiasing iyo 96dpi?
Ku jawaab ozkar
Kaliya waan tijaabiyey, waxay umuuqataa mid cakiran sidii aan horey usheegay ... Waxaan isticmaalaa antialiasing laakiin ma isticmaalo qasabka 96dpi ama wax kale.
Ma jiraan wax la mid ah qaanso u eg dpkg-dib u qaabeynta fontconfig-config? Iyada oo taasi ku jirta debian waxay ku xallisaa kuwa lagu qasbay 96dpi.
Runtu waxay tahay anigu garan maayo, sida haddii aysan ku dhicin KDE (si fiican uma sharixi karo)
Tijaabinta, waxay umuuqataa mid weyn, mahadsanid.
Ama waxaan qabaa dhibaatooyin xagga aragtida ah ama waxaan u arkaa xarfaha caadiga ah ee cilladaysan ...
Haa, waa mugdi ... blurry 🙁
Hagaag, waad haysataa iyaga HAHAHAHA
Ma garanayo, waxay umuuqataa mid cakiran, ma jecli
Ma aqaano inay fikradeyda tahay, laakiin kerning -http://es.wikipedia.org/wiki/Interletraje- waa mid aan caadi ahayn.
Hagaag, hada waxaan ku tijaabinayaa Archlinux waana inaan dhaho waan jeclahay iyaga umana ekayaan wax cakiran sida sawirka. Waan ka tegayaa iyaga.
Horey ayaan u dhigay iyaga iyo wax la yaab leh oo aan buurnayn ama aan waxba ahayn, oo fiiqan oo aad u fiican ayay u muuqdaan. Kuwa iyaga u arka inay si xun u hadlayaan waa inay habeeyaan magac ka soo horjeedka.
Aad ayaad u naxariis badnaan laheyd inaad nooga tagto goobahaaga anti-aliasing ali
Si loo ogaado waxa xuduudaha la dhigayo.
Diiwaangelinta dukumiintiga waxay umuuqataa mid qumman. In loo haysto inay tahay isha ugu weyn ee deegaanka, daaqadaha, menus, iwm. Waxba igama dhaadhicin ... Droid Sans ama Open Sans ayaa aniga igu raaxeysta.
Taasi miyay u tahay deegaanka waxaan u arkaa in yar oo "squashhed" ah oo ballaca ay leeyihiin ...
Tani maahan «kama-dambaysta» weli ... Waxaan u maleynayaa inay ka maqan tahay wax badan oo horumar ah in la helo 😀
Waxaan la joogayaa Droid Sans.
Ku jawaab Ellery
Xalliyaan dhibaatada pulseaudio
Ku rakib Xfce 4.8 on Debian Squeeze oo leh qoraalkan fudud